कमटेकमा अवलोकनकर्ताको घुइँचो, कम्पनीले ल्याएका आकर्षक छुट र अफर - ICT Frame Technology
राजधानीमा जारी “सुबिसु क्यान कमटेक २०१७” को आज तेस्रो दिन अवलोकनकर्ताहरुको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्धेश्यसहित क्यान महासंघको आयोजनामा बिहिवारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा भइरहेको क्यान कमटेक प्रदर्शनी भोली असोज १ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
यस संस्करणलाई सञ्चार प्रविधि र सुरक्षा प्रविधिको विशेष प्रदर्शनीको रुपमा सञ्चालन गरिएको छ । विश्वविख्यात कम्पनीदेखि स्थानीयस्तरका कम्पनीले ल्याएका वस्तु र सेवाको एकै थलोमा प्रदर्शनी भएको छ । मेलाको तेस्रो दिन अधिकांश स्टलहरुमा अवलोकनकर्ताहरको भिड लागेको देखियो । ६५ विभिन्न कम्पनीका ९० स्टल रहेको प्रदर्शनीमा प्रविधिका पछिल्लो संस्करणहरुवारे जिज्ञासा राख्ने र खरिद गर्नेहरुको बाक्लो उपस्थित रहेको पाइयो । कमटेकमा सहभागी कम्पनीहरुले ल्याएको विभिन्न आकर्षक अफरहरुले अवलोकनकर्ताहरुलाई थप आकर्षित गरेको देखिन्छ ।
मेलामा नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्ने र आकर्षक अफर ल्याउने क्रम तेस्रो दिन पनि जारी रह्यो । कमटेकको शिर्ष प्रायोजक सुविसु केवलनेटले ल्याएको हाइस्पिड इन्टरनेरनेट र क्लियर टिभीको विशेष अफरमा अवलोकनकर्ताको आकर्षण रह्यो । सुबिसुले कमटेकलाई लक्षित गर्दै १२ सय रुपियाँमा ७ एमबीको अनलिमिटेड फाइबर इन्टरनेट ल्याएको छ । साथै ६० एमबिपिएसको इन्टरनेट २ हजार १ सय, ३० एमबिपिएसको इन्टरनेट एक हजार ७ सय र १० एमबिपिएसको इन्टरनेट एक हजार ४ सय रुपियाँमा उपलब्ध गराएको छ । साथै सुबिसुले २०० भन्दा बढी डिजिटल र एचडी च्यानलहरू ल्याएको घोषणा गरेको छ । योसँगै सुबिसु नेपालकै सबैभन्दा बढी एचडी र डिजिटल च्यानलहरू उपलब्ध गराउने कम्पनी बनेको जारी विज्ञप्तिमा छ । स्पोर्ट, मुभिज, म्युजिक र इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड एडभेन्चर एन्ड लाइफ स्टाइललगायत विभिन्न च्यानलहरू ग्राहकको मागअनुसार उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसपटकको कमटेकमा आउने अवलोकनकर्ताका लागि निकै आकर्षक स्किम पनि छ । रु. ५० रुपियाँको टिकेट खरिद गरेर मेला आउँदा सनराइज बैंकले रु. २ सय रुपियाको बैंक खाता खोल्न पाउने सुविधा दिएको छ । साथै खल्ती पेमेन्ट सिस्टमले हरेक दिन लक्की ड्रमार्फत् २० इन्चको टिभी उपहार दिइरहेको छ । साथै कमटेकमा खरिद गरेको टिकेटबाट प्रत्येकले १० रुपियाँ आफ्नो एकाउन्टमा जम्मा गर्न सक्ने खल्तीले जानकारी दिएको छ ।
Previous Post Previous post: एटिएम फ्रड के हो र कसरी हुन्छ ? विक्रम श्रेष्ठ
Next Post Next post: क्यान कमटेक प्रदर्शनी भव्यताका साथ सम्पन्न